Yahuuda iyo Imaaraadka oo kawada shaqeynaya qorshe la xiriira Covid-19
Yahuuda iyo Imaaraadka Carabta oo ku dhawaaqay wada-shaqeyn
Israel iyo UAE oo aan lahayn xiriir diblumaasiyadeed ayaa bilooyinkii lasoo dhaafay ka shaqeynayey isu soo dhowaanshiyo.
WASHINGTON, US - Shirkado ku yaalla Imaaraadka Carabta iyo Isarel ayaa xooggooda isugu gayn doono cilmi-baarista iyo horumarinta teknoolajiyad lagula dagaalamayo cudurka Coronavirus, waxaa sidaas Khamiistii ku dhowaaqay labada dal oo aan lahayn wax xiriir diblomaasiyadeed oo rasmi ah.
Saacado kadib, wakaaladda wararka u faafisa Imaaraadka Carabta ee magaceeda loosoo gaabiyo WAM ayaa xaqiijisay qorshahan.
Lama shaacin magacyada labada shirkad iyo faah-faahino intaas dheer. Marka laga reebo dalalka Masar iyo Jordan, dalalka Carabta wax xiriir rasmi ah lama lahan Israel.
Hadalka Netanyahu ayaa yimid maalmo un ka hor xilliga la filayo in Israel ay billowdo qorshe Mareykanka uu taageerayo oo ay ku goosaneyso qeybo ka mid ah dhulka Daanta Galbeed ee ay haysato iyo Dooxada Jordan, talaabadaas oo ay si weyn uga digeen ururo, hay'addo iyo qaar kamid ah dowladdaha Islaamka.
Duulimaadkii ugu horeeyay Israel oo cagadhigtay Imaaraadka
Caalamka 31.08.2020. 22:30
Wafuud heer sare ah oo Yahuuda iyo Mareykanka ka socday ayaa saarnaa diyaaradda El Al.
Yahuuda oo duqeyn ku dishay gabar 18-bilood dhalan iyo hooyadeed
Caalamka 05.05.2019. 09:24
Wafdi ka socda Qadar oo yimid Muqdisho [Sawirro]
Soomaliya 28.11.2017. 13:15